ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံကို မိပြီ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံကို မိပြီ…
ဗုံးခွဲတဲ့ တရားခံကို မိပြီ…
Posted by super on Dec 22, 2011 in Copy/Paste | 27 comments
ဗုံးခွဲတဲ့တရားခံကို မိပြီလို့သတင်းရပါတယ်။ ရဲသတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ဗုံးခွဲသူတရားခံဟာ အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီး အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ ပဲခူးမြို့ကို ထွက်ခွာမဲ့မော်တော်ယာဉ်ကို စီးနင်းဖို့ ဆောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးထံမှ ထိုင်းဘတ်ငွေ အမြောက်အများအပါအဝင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၀၀) ကျော်လဲ သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထူးဆန်းတာက အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ နိူင်ငံသားစီစစ်ရေးကပ်ကိုင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါအမျိုးသမီးထံမှ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ စည်းရုံးရေးမှူးတာဝန်ခံ ကပ်ပြားတခုသာ သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဲသတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ပြည်သူများ အမြန်ဆုံးသိရှိနိူင်ဖို့ ဆက်လက်စုံစမ်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
ကျနော့် facebook ပေါ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တင်ထားတာကို ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အထဲမှာ ဗုံးတစ်လုံး ဖေါက်ခွဲပြီး သေဒဏ်ပေးသင့်တယ်ဗျာ။
ဘယ့်နှယ့် မနေ့က သေတဲ့ မိန်းကလေး သေသွားတော့
ဘာတွေများ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထွက်မှာလဲ ဆိုတာကိုလည်း
အော် နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေး။
မဟုတ်လောက်သေးပါဘူးလို့တော့ထင်တာဘဲ ( အထင်ပါ )
ကျွန်တော်လဲ မထင်ဘူး .. ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီသတင်းသာအမှန်ဆိုရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ချက်ချင်း ပလူပျံသွားမှာပဲ ..။ အစိုးရကလဲ ချက်ချင်း သတင်းထုတ်ပြန်မယ်ထင်တယ်..။သူတို့လဲ ခံရတာ များနေပြီကိုး ..။ ဖမ်းမိတာတော့ ဟုတ်လောက်တယ်.. ဒါပေမယ့် မသင်္ကာ အဆင့်လောက်ပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်..။
ဒီမနက်ဂျာနယ်တခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတာတော့ ယောကျာ်းဆို … အသက် 22 နှစ်တဲ့ … အိပ်ခဏအပ်ခဲ့မယ် ဒီနားမှာ တည်းခိုခန်းသွားရှာဦးမယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာလို့ ကြားတာပဲ .. တကယ်အဖြစ်မှန်ကို သိဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ .. အိပ်အပ်ခံထားရတဲ့ လူက … သေဆုံးသွားလို့ပါပဲ … ။
အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ စီစီတီဗွီကင်မရာတွေ တပ်သင့်နေပြီ … ။
(အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ စီစီတီဗွီကင်မရာတွေ တပ်သင့်နေပြီ ) ဆိုတာ
မနေ့က မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက တပ်လှန့်ထားတာ တော့ ပတ်သက်သူ ကျား .ကိုအောင်မျိုးသူ ဆိုပြီး …
အခု Facebook သတင်းဆိုတော့လည်း …….. ပိတ်ကားပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှုစား သင့်တယ်လို့ဘဲထင်ပါတယ်။
အမှုမှန်ပေါ်အောင် ထောက်ကြပါဦး.အိုင်ပီတို့ ရေ့
အမှန်တော့ တရားခံ အစစ်ကို အင်တာနက်ပေါ် ဖွသင့်တယ်။
မဟုတ်တဲ့ လူကို ဖွ မိရင် ပြသနာ မသေးဘူး အလကားနေရင်း ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။
အဲ့ ကောင်ဖြစ်ဖြစ် ကောင်မဖြစ်ဖြစ် ကို ကိုလိုနီခေတ် ဂျပန်ခေတ် က တရားခံစစ်နည်း အကုန်သုံးပြီး စစ်ကွာ
အမှန်တော့ တရားခံ အစစ်က သူကြီး အ+အပါ
ငါပဲ ငါပဲ…. ဟိဟိ
ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး လူ၂ယောက်သေသွား တဲ့ ကိစ္စက ရီစရာ ..ဟာသလုပ်စရာ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ကိုရင် ..
အချိန်ရရင် ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး …
လက်တွေ့ တွေးခေါ်လို့ရတဲ့ သဘောလေးတစ်ခုကို အားစိုက်ပြီး လုပ်ကြဘို့ပါ
ဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ် မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဒါလေးများ
ကြက်ဖွတ်ကတ် ဆိုတာလေးက တည်ကြက်လိုဖြစ်နေတယ်ထင်တာဘဲ ( အထင် )
အစိုးရက သူတို့ကိုယ်တိုင် ဗုံးလိုက်ထောင်နေတယ်လို့ သဘောရောက်စေနေတယ်
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့သတင်းကို အစိုးရက သတင်းမထုတ်ပြန်ဘဲနဲ့
ဘယ်နွားက ပြဿနာ လုပ်လိုက်တာကို ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်ဘို့ပါ
မှန်ပါ၏ အဲဒါကို ဆိုလိုတာ ..
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် သေဆုံးသွားသူမှာ သန့်စင်ခန်း ၀န်ထမ်း မမြစမ်းရည် အသက် ၃၀ နှစ်ဖြစ်ပြီး
ဒဏ်ရာရရှိသူမှာ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း မခင်မြတ်နွယ် အသက် ၂၄ နှစ်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
အိုင်ပီတို့ရေ… ကျနော် ဂွင်းဆက်လေးတွေကို
ဆလက်ကွက်တွေကို အသိနဲ့ သတိပေါင်းပြီး
မြန်မာတိုင်း(စ်) ထဲမှာတော့ အသက်(23) နှစ်၇ှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက ထားခဲ့တဲ့
အထုပ်က ဗုံးပေါက်တယ်လို့ပြောထားတာပဲ …………
ခွဲလည်းခွဲနိုင်တဲ့ ဗုံးတွေ … ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ပီး ဘယ်လိုသယ်လာလဲ ဆိုတာ တော်တော်စဉ်းစားစရာပဲ…..ခွဲကြပေါ့ တစ်ဘ၀တောင် ခဏပဲကောင်းစားမှာ.. ကျန်တဲ့ဘ၀တွေမှာ ပြန်ပေးဆပ်လိုက်ကြဦးပေါ့ ….
ကျနော်လည်း ဒီသတင်းအမှန်လို့တော့ မထင်မိပါဘူး၊ gtuonline.org ကနေကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် share ထားတာတွေ့မိလို့ ဂဇက်ရွာထဲက ရွာသူားတွေရဲ့ အမြင်လေးတွေကို သိချင်လို့တင်လိုက်မိတာပါ………
ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးချက်အရ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီလောက်မှာ အသက် ၂၂ အရွယ်လို့ ခန့်မှန်းရတဲ့ ကုလားဆင်လူငယ်တစ်ဦးက အဲဒီ သန့်စင်ခန်းထဲကို ၀င်လာပြီးတော့ အပေါ့သွားတယ်။ ပြီးတော့ သူကပါလာတဲ့အိတ်ကို ဒီမှာခဏအပ်ထားမယ်။ တည်းခိုခန်းစုံစမ်းဖို့ သွားအုံးမယ်ဆိုပြီး ထားသွားခဲ့တာပါ။ အခု တရားခံလို့ ယူဆရတဲ့ အဲဒီသူကို အမြန်ဆုံးဖမ်းမိဖို့ အတွက် ဆောင်ရွက်နေပါပြီ “ဟု ဗုံးကွဲခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုးသာဆုတ်သာ ရှိမည့်အနေအထား တစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်း လား
ကြးဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ကြိူဆိုသောအားဖြင့် အိမ်သာထဲတွင်ဖေါက်ပါသည် …ကံမကောင်းသူအိမ်သာသန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအသက်ဆုံးရှုံးပါသည်။
ဗုံး..ဗုံး ဘယ်သူဖေါက် မောင်ဖေါက်…ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက်…
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ ဗုံးဖောက်တာက KIA တဲ့။ ရန်ကုန်မှာ ဗုံးဖောက်တာကျတော့ ဘယ်သူလဲဟင်။